Vazo an-gitara :: Nanokanan-dry Eric Manana fahatsiarovana manokana i Nita Rakotomanga • AoRaha
Vazo an-gitara Nanokanan-dry Eric Manana fahatsiarovana manokana i Nita Rakotomanga
Nanolotra seho goavana feno fihetseham-po tetsy amin’ny CCEsca Antanimena i Eric Manana sy ireo mpanakanto maro namakivaky ny tontolon’ny mozika niaraka taminy, ny sabotsy sy alahady lasa teo. Noho ny fahalasanana tampoka nahazo an’i Nita Rakotomanga, anabavin’ny mpikambana ao amin’ny tarika Lolo sy ny Tariny, dia natokan’i Eric Manana ho azy ny seho roa natolotra.
Fahatsiarovana goavana no nisongadina tamin’ny fiarahana. I Dama no nampiara-peo voalohany tamin’i Eric Manana. Nisantarana ny fotoana ilay hira « Farakely » ny sabotsy tolakandro. Nanokatra ny fizarana faharoa ny feo Gasy, izay tarika noforonin’i Eric Manana, 22 taona lasa izay. Samy afa-po daholo ireo mpanatrika tao anatin’ny « Mananjary », « fa tsarotsaroako »,…
Nanolotra hafanana hafa tamin’ny fiarahana kosa ny fizarana natokana ho an’i Lolo sy ny tariny. Teo no nikaloan’i Eric manana, Bebey ary Benny an’ireo hira tsy afaka am-bavan’ny maro. Nanombohana ny fizarana ny fahatsiarovana fohy an’i Nita narahin’ilay hira « Raha mankany », « Tady vita fato-maty », « Akanjo fotsy » izay avy hatrany dia narahin’ny mpijery tehaka makotrokotroka sy fampiaraham-peo. Nampihetsi-po an’i Bebey ny fahatsiarovan’ny mpijery azy manokana tamin’ny fahoriana izay miantraika amin’ny fianakaviany.
Vahinin’ny seho ny sabotsy i Simon Randria, andrarezin’ny Kaiamba. Nivetso an’ilay « Aok’etsy» sy « faniriako hatr’izay » niaraka tamin’i Eric Manana sy Dama izy. Namaranana ny seho ny tambabe niarahan’ny Feo Gasy, Eric Manana, Bebey sy Benny ary Dama tao anatin’ilay hira « Raha ho avy Ralala », « Vorom-be tsara dia »,…
Fampisehoana an-dampihazo :: Nahaliana ny tantara « Ny Voromailala »